Baarlamaanka oo maanta kulan ka leh soo afjarida howlaha hor-yaala kalfadhiga 8aad – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanka oo maanta kulan ka leh soo afjarida howlaha hor-yaala kalfadhiga 8aad
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah yeelanaya kulankoodii u horeeyay tan iyo markii todobaad ka hor Madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray xeer uu ku meel mariyay hanaankii doorashooyinka.
Kulanka maanta ayaa looga hadli doonaa shuruucda hartay iyo soo afjarida howlaha hor-yaala Kalfadhiga 8aad ee Baarlamaanka oo noqon doona kii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka hada jira.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ah Hab-dhowraha Baarlamaanka ayaa sheegay in shuruuco badan uu hor-yaalo baarlamaanka, kuwaasoo qaar ka mid ah maray akhrin, isla markaana ay u dhiman tahay kaliya in la ansixiyo.
Maxamed Cumar ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan uu jeedin doono khudbad ku aadan howlaha hor-yaala Baarlamaanka iyo soo afjarida shuruucda hartay inta lagu guda jiro kalfadhiga 8aad.
Baarlamaanka Federaalka ayaa muddo labo bil uga harsan shaqadooda, iyadoo 20-ka bisha Agosto lagu wado in la soo dhiso Baarlamaan cusub oo bedela baarlamaankii hada jira.